६ महीनामा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा ३२ % बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी १७.९५ - Aathikbazarnews.com ६ महीनामा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा ३२ % बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी १७.९५ -
nyu creative writing reading series google can you do my homework can you do my homework for me could an essay be written in first person creative writing images for grade4creative writing toolkit ks2 creative writing vocabulary worksheets creative writing text types university of baltimore creative writing mfa creative writing stimulus hsc creative writing for graphic novel how does critical thinking help in everyday life louisiana purchase paper thesis creative writing angel card meaning contoh soal essay bahasa inggris tentang offering help uc essay help online personal statement help creative writing groups leeds essay on paid news creative writing worksheet grade 1 business plan writing help hazel eyes creative writing coventry university creative writing staff creative writing correspondence course uk primary homework help greece sparta writing service in aem m.lit creative writing at university of glasgow creative writing related jobs new york post creative writing course bundle what makesagood writer essay
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ७ करोड ७२ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. १० करोड २५ लाख पुगेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै नाफा बढेको हो ।
चुँक्तापूँजी रू. १ अर्ब १४ करोड रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. २८ करोड ७३ लाख सञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ६८ करोड ३० लाख बीमाुशल्क आर्जन गरेको छ । यो बीमाशुल्क गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ६१ करोड ८१ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । जारी बीमा लेखको संख्या ८२ हजार २७२ रहेको छ ।
त्यसैगरी चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव ९५, मूल्य आम्दानी अनुपात ३६ दशमलव ९३ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १९१ दशमलव ८१ पुगेको हो ।